Wasiir Maryama Qaasim oo iska casilshay xilkii ay haysay, quusna kamuujisay xukuumadda (dhegayso) – Radio Daljir
Noofember 15, 2017 1:10 g 0
Wasiirkii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda faderaalka ee Soomaaliya Drso Maryama Qaasim ayaa iska casilay xilkii ay ka haysay dowladda.
Waraysi ay siisay warbaahinta Muqdisho ayay ku sheegtay sabaha ay isku casishay inay ku salaysantahay isbarbaryaac dhanka shaqooyinka iyo jahwareer shaqo oo ay garan kari wayday waxa ay qabato.
Wasiir Maryama ayaa sheegtay inay taqaan ka shaqaynta hay’ado leh habraac shaqo oo dhamaystiran, waxaana ay hoosta ka xariiqday inay iyadu mucaarad ku ahayn dowladda ayna u rajaynayso horumar iyo guul.
Maryama Qaasim oo caan ku ah dhanka daacadnimada iyo afgaabnimda ayaa aad loogu xasuustaa mashruucii Aada Waxbarashada ee ay ka bilowday dalka oo waxbarasho loogu dirayay kun carruur ah, mashruucaasi oo ay hirgalisay kal hore 2012-2014 markii loo magacaabay wasiirkii adeega iyo daryeelka bulshada ee xukuumaddii Ra’iisul wasaare Saacid, mashruucaasi ayaa guul daraystay markii ay iyadu iska casilay wasaaraddaasi.
Waxaa ay sheegtay hadda inay ku shaqayn doonto dhanka horumarinta bulshada oo ay si shaqsi ah ay dadkeeda ugu adeegi doonto.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo soo dhoweyn sare loogu sameeyey Baraawe (sawiro)